देश खोजीरहेकाहरु ! | Hamro Patro
रात्रिको ११ : ०३
देश खोजीरहेकाहरु !
Mukti Gautam - Apr 15 2018
हामी चराहरु जस्तै छौं, पंख फिजाएर अनन्त उडिरहेका । मन छ या आफू छैनौं मनसँग अथवा मन छैन आफ्नो वसमा ! झल्याक झुलुक आउँने नयाँ दृष्यहरुले न लोभ्याउन सक्छन्, न पुरानोले बाँध्न नै । सबै भएर पनि केही नभएका चराहरु जस्तै !
नेपाल नफर्किएको करिब १४ वर्ष पुगेछ, देश छोडेको त १८ वर्ष नै पुग्न थाल्यो । आजकाल कहिलेकाही त फर्किने कुरा सोच्दा पनि कता कता डर लागेर आउँछ । सशस्त्र युद्धको बेला काठमाण्डौबाट मेरो पूर्ख्यौली घर रुकुम जाने कुरा सोच्दा त्यस्तै हुन्थ्यो । लामो समय अनुपस्थित हुँदा त्यहाँ भएको परिवर्तन सँग अनभिज्ञ भएको र कतिपय सुनेका कुराहरुले मानसिकता बनाउने भएर पनि यस्तो भएको होला जस्तो लाग्छ । अथवा बाहिरको सुख सुविधासँग नेपालको समस्याहरूलाई दाँजेर पनि हुनसक्छ ।
चिने जानेका बाट विदेश आएकोमा हुने घोचपेच र गुनासोहरूले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । एक थरी छन् ईर्ष्याले गाली गर्छन् विदेश बसेकोमा । आफू जान नपाएका, त्यहाँ नेपालमै बसेर केहि गर्न नसकेका या अरूको राम्रो देखेर जल्न मन पराउने हरू छन् एक थरी । कोही कोही आफू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका सरकारी जागिरे र राजनितीलाइ जागिर बनाएर हिडेका सरकार र जनताको बीचमा बसेर कमाई खाने केही दलालहरु पनि छन् यो समुहमा । यिनीहरु आफू देशमै बसेर ठूलो काम गरेको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । नमीठो मुख पारेर गाली गर्छन् यिनीहरूले । कहिले दुःख लाग्छ र कहिले हाँसो, यिनीहरुका कुरा सुनेर ।
अर्का थरी सहृदयी छन् । माया गर्छन् । पैसा मात्रै केही होइन या भौतिक सुविधाले मात्रै पुग्दैन भनेर फर्किन सुझाउँछन् । यिनीहरुको कुरा सुन्दा मीठो लाग्छ, आजै फर्किन मन लाग्छ । केही पुराना र केही नयाँ पुस्ताका मान्छेहरु छन् जो ईमान्दारिता पूर्बक नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छन् र गरिरहेका पनि छन् । नसकेर या नपुगेर उनीहरुमा यो राष्ट्र प्रेम आएको भने होईन । यिनीहरु बाहिर जानेलाई पनि हेयले हेर्दैनन् । बरु नेपाल फर्किए हुन्थ्यो भनेर मनदेखिनै चाहान्छन् यी सज्जनहरु । मेरो नमन छ यी सज्जन हरु प्रति ! उसो त यतै हुर्के बढेका आफ्ना सन्तानहरु नेपाल गएर काम गरे या उतै बसे पनि हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि नलाग्ने कहाँ हो र ! हामी विदेशमा बस्नेहरू लाई पनि कहाँ विदेशी माटोमा मजा मात्रै भइरहेको हुन्छ र अरूले सोचे जस्तै !
“ह्वेर आर यू फ्रम ?”
देश छोडेको यो १८ वर्षमा १८ सय पटक भन्दा बढी यो प्रश्नको जबाफ दिइयो होला ।
“ आई एम फ्रम नेपाल, यू नो माउन्ट एभरेष्ट, ईट्स ईन नेपाल, बुध्द वाज बर्न ईन नेपाल”- यो त आफूलाई चिनाउँदा या नेपालको कुरा गर्दा टाउको दह्रो पार्दै ३६०० पटक भन्दा बढि भनियो होला ।
हिन्दी भाषीले हिन्दीमा, पन्जाबीले पन्जाबीमा, बंगलादेशीले बंगालीमा, पाकिस्तानीले उर्दू र श्रीलंकालीले तामिल र सिंहलीमा सयौं पटक उनीहरूकै भाषामा कुरा गर्न आए र अलमलिएको थाहा पाए पछी यही प्रश्न गर्थे । मैले पनि भाषा मिलाएर सके उनीहरूकै न सके अंग्रेजीमा जबाफ फर्काउँदै आए “आई एम फ्रम नेपाल।” कहिले त मेक्सिकन या कोलम्बियाली हरू समेत “स्पेनिस” बोल्दै कुरा गर्न पनि आए । फेरि उही “आई एम फ्रम नेपाल....आदि” चलिरहेको छ र हामी पछिको पुस्तालाई पनि छोड्ला जस्तो छैन यो समस्याले ।
२००१ मा अमेरिकाको सेप्टेम्बर ११ को घटना पछि नर्वेको ओस्लोमा हुँदा एउटा बृद्धाले बसमा म बसिरहेको सिटबाट अगाडी बढ्दा हात र मुखले हेय भाव देखाएर अघि बढिन्, म अचम्भित भएर निरीह हेरिरहें । उनको त्यो घृणाको भावको पछाडी मेरो मुस्लिमहरू सँग मिल्ने अनुहार थियो सायद । सबै मुसलमानहरू आतंककारी देख्ने मनोबृतीको कारण रङ्ग मिल्ने भएर बिदेशिएका हामी नेपालीहरूपनि कैयौपटक शिकार भएका छौं । अहिले पनि कुनै अप्रिय घटनापछि या अरू सामान्य अवस्थामै आफूतिर ठोक्दिन आउँने सशंकित आँखाहरू अघि म उस्तै निरीह नै हुन्छु, भलै अहिले मसँग क्यानडाको नागरिकता पनि छ र यतैको पासपोर्ट पनि ।
एक पटक नर्वेमा एक भारतीय दम्पतीसँग भेट भयो । गोरा बाहेक अरू मुस्किलले देखिने ठाउँमा आफै जस्ता मान्छे देख्दा खुलदुलीको सिमा नै रहेन ।
“ह्वेर आर यू फ्रम?” – हामीले पनि प्रश्न फ्याँकि हाल्यौं उनीहरू तिर ।
“वी आर फ्रम क्यानडा” हामी चकित पर्यौं, मनमनै भन्यौ “मोराहरु फूर्ती गर्छन् ।” हामीले उनीहरूको देश पहिले नै खुट्याईसकेका थियौँ, उनीहरूको मुखबाट उत्तर सुन्न चाहेकोले मात्र प्रश्न गरेका थियौँ । उनीहरू भारतीय भएको कुरामा हामी ढुक्क थियौँ ।
तर उनीहरू क्यानेडियन नागरिक भएका र क्यानडामै बसोबास गर्ने कारणले उनीहरूको जबाफ पनि ठीक, उनीहरूको रूप, रङ्गको आधारमा हाम्रो अन्दाज पनि सायद ठिकै थियो होला त्यस बेला । अहिले आएर हामीहरूको हकमा पनि अरूहरूको मानसिकता त्यस्तै हुने नै भयो ।
चाईनिज या जापानीज अनुहारका अरू कसैले पनि फरक देशको नाम लिए भने त्यस्तै लाग्छ, चाहे उनीहरू त्यही देशमा जन्मिएका किन नहोउन् । बर्षौं अर्को देशमा बसे पनि रङ्ग र स्वरूप त फेरिँदैन नि !
मैले माथिका प्रशंग हरू कोट्याउँनुको पछि जति बाहिर बसे पनि वा उताको नागरिक भएपनि अनुहार र रँगले हुने भेदभाव या भोग्नु पर्ने समस्यालाई अलिकति भएपनि बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हो । अथवा मातृभूमी या कर्मभूमी बीचमा परेको आप्रवासीको समस्या या पीडालाई उल्लेख गर्न खोजेको हो ।
कतिपयलाई लाग्ने जस्तो बिदेशमा बस्नेहरु बिदेशमै रमाउँने र देश न सम्झिने हुँदैनन् । मेरो हकमा भन्ने हो भने मैले जीवनमा सबै भन्दा धेरै मेरो गाउँ सम्झिएको अहिले नै होला । हरेक कुराहरु सम्झिन्छन्, हरेक घट्नाहरु ठोक्किन आउँछन् । दु:ख पीडामा मात्रै हैन; मिठो खाँदा, राम्रो लाउँदा पनि देश सम्झिन्छ ।
मैले क्यानडाको नागरिकता लिदा नेपालको नागरिकता छोडेको कतै महशुष नै गरिन र त्यो गरेको पनि हैन । क्यानडाकै नेताले नागरिकता लिने कार्यक्रममा गर्व साथ स्वागत गरे र आफ्नो जन्मेको देश, भाषा र संस्कृतिको महत्व पनि भने । उनी आप्रवासी नै थिए । क्यानेडियन सरकार आप्रवासीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्मको कुरामा अत्यन्त संवेदनशील छन् र संरक्षणको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि संचालन गरिरहेका छन् ।
तर हामी आप्रवासीहरूको समस्या भने अर्कै छ । हामी मनले अर्को देश स्विकार गरि हाल्न सक्दैनौं । आफूले छोडेर आएका हरेक चीजहरूले बिस्तारै सताउन थाल्छन् । पहाडहरू, खोला, घर, गाउँ, आफन्त र सबै सबै मनमा चौबीसै घण्टा घुमि रहन्छन् । गाउँको ठूलो ढुङ्गा, ठूलो रुख, धुलाम्य बाटो, खेतका गह्राहरु, जङ्गल सबैले तान्न थाल्छ मन । मामा, काका, साथी सबै आउँछन् एकै पटक । बिधालय, मन्दिर, गोठ सबै आउँछन् ।
यता सबै पुगेर पनि अपुरै हुन्छ । मन खाली खाली जस्तो । यताको सबै चीज उताको सँग दाँज्न मन लाग्छ । देश या मातृभुमी भनेको भावनासँग जोडिएको कुरा हो । यो सम्बन्ध हो । नाता हो । चाहेर वा छोडेर सजिलै हराउने कुरा हैन ।
धेरै आफन्तीले भनेका राम्रा कुराहरू भन्दा थोरै नराम्रा मान्छेहरूले भनेका तिखा शब्दहरूले पोल्छन् । अन्य देशहरूले विदेशमा गएका आफ्ना नागरिकहरूको चासो लिएको देख्दा मन कल्पिदो रहेछ । सर्वसाधारणले भनेको त चित्त बुझाउँला, तर जिम्मेवार पदमा रहेका हरुको पनि विदेश गएका प्रतिको धारणाले मन अमिलो हुन्छ । कोही नजीक सम्झिएकाहरुको ब्यबहार पनि त्यस्तै हुन्छ । फर्किन पनि कता कता डर लाग्ने र बस्न पनि । सधैँ दोधारमा हुन्छौं हामी ।
लाग्छ हाम्रो कुनै देश छैन । बीचमा छौं हामी । हुन त दुईटा देश हुन्छ हाम्रो रोजाईमा । बच्चाहरु एक परिवेशमा हुर्किन्छन्, उनीहरुको आफ्नो संसार हुन्छ । हामी न बृध्द आमा बा संग रहन्छौं, न छोरा छोरीहरु सङ्ग हुन्छौं । न यताको हुन सकिन्छ, न उताको नै रहन । खुट्टा यता र मन उता । हामी जीवनभरि सायद स्थायित्व खोजीरहन्छौं र कहींको हुँदैनौं । मन हुँदैन आफूसँग, मनलाई पछ्याईरहन्छौं, दौडीरहन्छौं मनको पछि । खुलेर देश भन्न नै कठिन, हामी देश खोजिरहेका आप्रबासीहरु ।
अप्रिल ०७, २०१८